Elsa, ny tafiotra goavana voalohany ho an’ny vanimpotoanan’ny taona 2021, mamely an’i Karaiba · Global Voices teny Malagasy
"Dia hanangona ireo potipotin-javatra indray isika amin'ity fihaonana isantaona amin-dRafaharavàna ity"
Voadika ny 05 Jolay 2021 3:16 GMT
Jamaika rehefa mipoaka ny masoandro: ilay mpanamory sambondanitra ao amin'ny NASA Terry Virts, injenieran'ny sidina Expedition 42 tao anatin'ny Toby an'Habakabaka Iraisampirenena, no nibitsika ity saripikan'ny Nosy Karaiba ity ny 10 Janoary 2015.. Sary an'i NASA Johnson tao amin'ny Flickr, CC BY-NC 2.0.
Dia mbola i Karaiba ihany no voalohany eny ambava-ady amin'ny fiatrehana ny vanimpotoanan'ny tafiotra mahery ao Atlantika. Elsa, voahosotra ho tafiotra mahery trôpikaly ny 1 Jolay, no rafitra toetrandro voalohany goavana ho an'ny 2021, ary niditra an-tanety ny 2 Jolay lasa teo tao Barbady.
Amin'ny firesahana mampihetsi-po an'ilay Barbadiàna poeta efa nodimandry, Kamau Brathwaite, nandefa an'ity tao amin'ny Instagram ilay artista Annalee Davis:
Satria amin'ny ankapobeny dia tany marindrano ny ao Barbady, vetivety foana dia tsapa ny fiantraikan'ilay tafiotra mahery. Ary satria ao anatin'ny fanairana fisiana tafiotra trôpikaly ny firenena izao, mitandahatra manangona vatsy ireo olompirenena, ny sasany amin'izy ireo, teo am-piandrasana ny fandalovan'i Elsa, nisafidy ny hipetraka tany amin'ireo fialofana rehefa misy tafiotra. Elsa, narahana rivotra nifafy sy oram-baventy, dia nanatona an'i Barbady avy any atsimo-atsinanana, niteraka fahatapahana herinaratra tany amin'ny faritra sasantsasany. Nihatra ihany koa ny fanairana fisiana tondradrano. Nisy ihany koa ireo tatitra milaza fahatapahana hazo, isan'izany ny tao amin'ny hôpitaly lehibe ao amin'ny firenena, izay efa nizaka sahady ny fahasimban'ny tafontrano sy ny varavarankely, hatramin'ny fahatondrahan'ny rano any amin'ireo departemanta sasantsasany. Manerana ny nosy, marobe ihany koa ireo trano hazo no simba.
Ny nanaraka tao anatin'ny zotran'ilay tafiotra mahery dia i St. Vincent sy Grenadines, izay tsy maintsy niatrika ny which has been vokatr'ireo fipoahana tsy nitsahatr'ilay volkano La Soufrière ao aminy, no sady tsy maintsy miatrika ny valanaretina, tahaka izao tontolo izao. Ao amin'ny Twitter, ilay mpanao gazety mipetraka ao Trinidad & Tobago, Wesley Gibbings, nihevitra fa “ao #Karaiba, toy ny efa fomba fanao dia hanangona ireo potipotin-javatra indray isika amin'ity fihaonana isantaona amin-dRafaharavàna ity” sady nanontany tena raha toa io “ka hisy fiantraikany amin'ny fomba fandraisantsika an-tànana ny #valanaretina”.
Mandritra izany fotoana izany, tao amin'ny Instagram, ilay mpakasary mipetraka ao St. Vincent, Nadia Huggins, nandefa lahatsary ahitàna ireo dingana voalohany tamin'ny fanatonan'i Elsa :
Avy eo ilay firenena nosy dia niaina fafin-tafiotra nahatratra hatramin'ny 153 km (95 miles) isanora, araka ny nolazain'ny National Hurricane Center ao Etazonia.
Nanomboka ny 4 Jolay, rehefa avy nandalo tao Haiti sy ny Repoblika Dôminikàna, nataon'i Elsa fantatr'i Jamaika ny fisiany, na efa nihena aza ny heriny. Ireo mpisehatry ny aterineto eny an-toerana ao Kingston dia milaza amin'ny Global Voices fa niaina oram-batravatra ry zareo, saingy tsy dia nisy rivotra firy – hatreto aloha. Na izany aza, iray raha kely indrindra ny Jamaikàna mpampiasa Twitter nahatsapa fa tena tsy ampy ny fampiasan'ny sampana mpamantatra toetrandro ao amin'ny firenena ny media sôsialy, raha resaka fandefasana fanavaozana ara-potoana momba ny toedraharaha no resahana.
Tao amin'ny bilaoginy, Emma Lewis nanoritsoritra ny zavatra niainany teo am-piandrasana ilay tafiotra mahery:
Hariva tena mafana mahatsemboka. Tsapanao fa afaka azonao atsotra ny tànanao ary mahatsapa ny hamandoana sy mamono ny rantsan-tànanao sady mamolavola azy hahazo endrika, toy ny feta fanaovana lasitra. Mikiraviravy tsy misy mihetsika ny ravina eny amin'ny hazo. Sahona iray, miaraka amin'ny angovony rehetra, no misisika mafy mitabataba ao ivelan'ny varavarankelinay: ‘Ho avy ny orana!’ […]
Izao no fotoana isantaona anombohako miondrika mijery sarintany mampivarahontsana misy ireo loko mihondinkodina any amin'ireo tranonkala isankarazany miresaka toedrandro. Tiako ery izy ireny rehefa ilay tsy mihetsika iny.
Tao amin'ny Instagram, nandefa saripika ny Jamaica Observer, ahitàna ny fiakaran'ny rano ao Bull Bay, folo kilaometatra mahery any atsinanan'ny renivohitra, amin'ny morontsiraka atsimo atsinanan'ny nosy:
Niteraka tondradrano ihany koa ireo oram-baventy tany amin'ny faritra be mponina tao Spanish Town, ary tao amin'ny paroasin'i St. Thomas, toerana misy lalambe migodana mbola eo amperiny ny fanamboarana azy. Mitohy miakatra ny haavon'ny rano tondraka any amin'ireo faritra maro, nahatonga ilay mpitarika ny mpanohitra, Mark Goldingn handefa fampitandremana iray tao amin'ny Instagram nanentanana ny olona mba ho mailo :
Raha mbola teo am-panohizana ny làlany namakivaky ny firenena i Elsa, namela tondradrano henjana teny amin'izay nolalovany ilay tafiotra mahery, isan'izany ny tany amin'ireo hôpitaly sasany, toy ny tranga nisy tao Barbady.
Ny 4 Jolay tamin'ny 5 ora hariva, tany amin'ny morontsiraka atsimo-atsinanan'i Kioba no nisy an'i Elsa, ary aorian'izay dia heverina hizotra ho any Florida miaraka amina rivotra efa manana hafainganam-pandeha ambany dia ambany.